Nabad Suggida oo soo bandhigtay Haweeney lagu qabtay iyadoo wadata hub – STAR FM SOMALIA
Nabad Suggida oo soo bandhigtay Haweeney lagu qabtay iyadoo wadata hub
Ciidamada Hay’adda Nabad Suggida Iyo Sirdoonka Qaranka Somaliyed, ayaa soo bandhigay Haweeney, iyadoo sidata hub lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
Haweeneydaan oo magaceeda ku sheegtay Sumaya Maxamed Geedi, oo da’deeda ay tahay 28-sano jir ayaa lagu qabtay meel ku dhaw Isgoyska Black Sea ee Degmada Howlwadaag, kadib markii ciidanka NISA ay ka shakiyeen.
Haweeneydaan ayaa qori la soo fur furay waxa ay ku wadatay Boorso nooca Laptob-yada lagu qaato, waxaana Baaris lagu sameeyay kadib laga helay Boorsadii ay waday qori noociisa uu yahay Ak-47.
Sumaya oo laga wareystay Warbaahinta Dowladda ayaa sheegtay Qoriga inuu u soo dhiibay nin ka tirsan Ururka Al Shabaab oo haasaawe uu kala dhaxeeyo, ninkaasi ayeey magaciisa ku sheegtay C/raxmaan.
Sumaya Maxamed Geedi oo hada ku jirta gacanta ciidamada NISA, ayaa sheegtay inay degan tahay Xaafada Tokyo ee Suuq Bacaad ku taala, waxaana madaraso ay ka dhiganaysay Qur’aanka oo ku taalo nawaaxiga Isgoyska Baar Ubax.
C/raxmaan ninka lagu magacaabo oo Sumaya Boorsada u soo dhiibay ayaa u sheegay inay u geyso ruux kale oo aysan garaneyn, balse Sumaya maalintii ruuxaasi ay balameen ayeey iswaayeen, kadibna maalintii xigtay iyadoo u sii socota ayaa waxaa qabtay ciidamada NISA.
Al Shabaab ayaa haweenka waxa ay u adeegsadaan inay u kala gudbiyaan hubka iyo Bambooyinka.
Wasiirka Amniga “Haddii aan amniga ku guuleysan weyno, doorashadana dul duleelo ayay yeelanaysaa”
Galmudug oo Puntland ku eedeysay in ciidamo badan ay soo dhoobeen Gaalkacyo